भरतपुर अपडेट : ९० मत बदर गरिने, पुन :मतगणनानै गराउने आयोगको तयारी ! अव के गर्लान् कांग्रेस-माओवादी ?
ARCHIVE, POLITICS » भरतपुर अपडेट : ९० मत बदर गरिने, पुन :मतगणनानै गराउने आयोगको तयारी ! अव के गर्लान् कांग्रेस-माओवादी ?
काठमाडौँ - चितवनमा पुन: मतदान नहुने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा फेरि मतदान नगराउने र मतगणना सुरु गर्ने तयारी आयोगले गरेको हो । हिजो साँझ निर्वाचन आयोगमा बसेको आयुक्तहरुको बैठक निश्कर्षबिहीन भएपछि आज पुन: बैठक बसेको थियो ।